Manolotra toeram-pijerena fiaramanidina avo lenta sy manana tantara manomboka amin'ny taonjato faha-8, Andorra dia firenena mahafinaritra ho an'ny mpizaha tany. Noho izany, ny fanontaniana raha ilaina ny visa iray ho an'i Andorra dia manan-danja hatrany.
Karazana visa inona no ilaina ao Andorra?
Ny visa any Andorra, mazava ho azy, dia ilaina. Na izany aza, misy ny endri-javatra sasany ao amin'ny tapakila azy. Tsy anisan'ny faritra Schengen i Andorra , saingy manana sata ara-politika manokana izy, eo ambany fitarihan'i Espaina sy Frantsa. Izany no mahatonga ny fidirana ao amin'ny firenena ny visa an'i Frantsa na Espaina na fanjakana hafa ao amin'ny faritra Schengen - mety amin'ny roa na vice-visa dia mety.
Raha te-hiditra any Andorra, ohatra, ianao, hitsena amin'ny iray amin'ireo toeram-ponenany , dia alefa mivantana amin'ny consulates ao Espaina na Frantsa ny visa. Na ahoana na ahoana, raha hitsidika an'i Andorra ianao dia ho any amin'ny iray amin'ireo firenena ireo, satria i Andorra tsy manana ny seranam-piaramanidina na ny arabe. Ny paikan'ny famoahana visa ho an'i Andorra dia mitovy amin'ny an'ny fahazoan-dàlana Schengen. Ary ny lisitr'ireo antontan-taratasy tokony hapetraka, dia ho hitanao ao amin'ny tranonkalan'ny consulat izay kasainao hampiharina.
Fahasalamana ho an'ny visa ho an'ny tenany manokana
Raha toa ianao ka hanao visa ho an'i Andorra irery, fa tsy amin'ny alalan'ny foibe orinasam-pizahantany na ny orinasan-tserasera, dia tokony handinika ireto nuances manaraka ireto ianao:
Ny fiteny ampiasaina ho an'ny fametrahana ny fanontaniana misy dia teny anglisy sy espaniola;
Ny pasipaoro vahiny dia tokony ho efatra volana fara-fahakeliny;
Raha vaovao vaovao ny pasipaorony, dia miaraka amin'izay dia ilaina ny mandefa dika iray hafa amin'ilay tranainy, izay ahitana visa Schengen;
Ny sary dia tokony ho matematika, miaraka amin'ny loha-hevitra monophonic;
ny mpandinika dia mila mampiditra ny nomeraon-telefaona, ary koa tsy misy ny asa sy ny antso an-tariby, raha misy;
Ho an'ny ankizy mandehandeha miaraka amin'ny iray amin'ireo ray aman-dreny, mila manana fahazoan-dalana hivoaka ny firenena ianao, omen'ny ray aman-dreny faharoa amin'ny endrika nofaritan'ny consulat, ary nohamarinin'ny notatera iray;
amin'ny fanoratana voalohany ny visa dia ilaina ny manamarina ny fanatrehana ny fananana tranom-pitokisana sy tsy azo antoka ao amin'ny faritry ny firenena;
Mila manamarina ny fandrosoana ara-bola ianao, dia ny hoe manana 50 euros isan'andro ianao mandritra ny fijanonanao any Andorra - matetika ny vola avy amin'ny banky;
Ny fitsaboana ara-pahasalamana dia tsy maintsy mandrakotra ny vola mifandray amin'ny hopitaly maika sy ny fitaterana mankany amin'ny tanindrazany;
Ny fisotroan-dronono mandehandeha dia tsy maintsy manaporofo ny fidiram-bolan'ilay olona manohana ny dia, ny maha-izy azy, ny taratasy fifanekena ary mazava ho azy ny dika mitovy amin'ny taratasy fanamarinana ny fisotroan-drononony.
Ilaintsika koa ny mahatsiaro fa nanomboka tamin'ny Septambra 2015 ny fomba fitsaboana amin'ny alàlan'ny fanodinan-dàlana dia nampidirina (famerenana ny dian-tongotra) ary ny sary dizitaly rehefa mahazo visa Schengen. Ary raha handefa visa voalohany ianao aorian'io fanavaozana io, dia mila miaraka amin'ny antontan-taratasy ianao. Avy eo ireo tahirin-kevitra ireo dia voatahiry ao anaty tahirin-kevitra mandritra ny 5 taona.
Raha ianao no manoratra ny tenany, ny vidin'ny visa ho an'i Andorra dia handoa anao € 35 - izany dia sanda ara-bola. Ho an'ny zaza latsaky ny 6 taona, izay tsy manana ny pasipaorony, dia afaka ny visa.
Raha mikasa ny hijanona ao Andorra ianao mandritra ny 90 andro mahery mandritra ny tapany voalohany amin'ny taona dia mila manokatra visa tsy misy an'i Schengen sy visa nasionaly ianao. Azo atao ao amin'ny Ambasady Andorran izany Paris, Madrid na iraka diplaomatika hafa izay nomena ny taratasy fangatahana vita, sary 4 ary ny fotokopia amin'ny pejy voalohany amin'ny pasipaorony.
Raha mpihanika amin'ny skiing ianao, ataovy izay hitsidihana ity firenena mahafinaritra ity, satria ankoatra ny tranombakoka maro ( tranom-bakoka, tranombakoka mozika, tranombakoka mikrominiature ), ny renivola malaza indrindra sy ny fividianana fety , misy ihany koa ireo toeram-pizahantany tsara indrindra toa an'i Soldeu-El-Tarter, Pal-Arinsal , Pas de la Casa, sns. Etsy andaniny, ny vidin'ny fialantsasatra toy izany any Andorra dia ambany lavitra noho ny any Soisa na Aotrisy.
Fialan-tsasatra any Slovenia
Andorra - zava-misy mahaliana
Mialà ao Montenegro miaraka amin'ny ankizy
Ny akanjo lamaody an'ny vehivavy - 34 fototry ny modely modely ho an'ny tsiro rehetra
Vinilin dia balsama ao Shostakovskiy
Miorina amin'ny europallets
Sakafo ho an'ny fanadiovana ny vatana
Sarah Jessica Parker tsy mandroba ny zanany lahy amin'ny akanjo amin'ny boutique
Kiraro kiraro ankavia
Ny fitsipiky ny lalao "Monopoly" (latabatra, malaza)
Pies miaraka amin'ny ovy sy holatra
Ahoana no hamonoana haingana ny tongotrao?
Nurofen amin'ny fampinonoana